Margarekha » किन होला प्रधानमन्त्री ओली–नेपाल १९ दिनदेखि बोलचाल बन्द
किन होला प्रधानमन्त्री ओली–नेपाल १९ दिनदेखि बोलचाल बन्द
प्रकाशित मिति : September 10, 2019
ओली : म सिंगापुरमा भए पनि सम्पर्कमै हुन्छु, यसबीचमा पर्याप्त छलफल भएकै छ, बैठक राखेर तपाईं (प्रचण्ड)ले निर्णय गराउन सक्नुहुन्छ, म सम्पर्कमै हुनेछु, तर सहमतिमा निर्णय गराउनुहोला ।
नेपाल : सहमति नभए पनि निर्णय भइहाल्छ नि, मेरो सहमतिविनै अस्ति निर्णय गराउनुभएको होइन ? कि सहमतिबाट हुन्छ, सहमति हुन नसके विधि र प्रक्रियाबाटै निर्णय भइहाल्छ ।
ओली : अध्यक्ष तपाईं (माधवकुमार नेपाल) कि म ? अध्यक्षसँग पो सहमति लिने भनेको हो त मैले, तपाईंसँग पनि सहमति लिने भनेको छु र ?
नेपाल : अध्यक्ष र सचिवालय सदस्यको बराबर हैसियत हो । विधि र प्रक्रियाबाट निर्णय गर्दा सबैको एक भोट हो, सबैको मत बराबर हुन्छ ।
प्रचण्ड : यसमा विवाद नगरौँ । स्वास्थ्यलाभ र शुभयात्राको कामना पो गर्ने हो त ।
नेपाल : शुभकामना त मेरो छँदै छ, तपाईं स्वास्थ्यलाभ गरेर छिटै फर्किनुहोस्, म स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दछु ।
ओली : तपाईंको कामना चाहिँदैन, तपाईंको शुभकामना मलार्ई लाग्दा पनि लाग्दैन । तपाईंले त मलाई मरोस् भन्दै स्वास्थ्यबारे अफवाह फैलाउँदै हिँडिरहनु भा’छ । म तपाईंको शुभकामना लिन्नँ ।
नेपाल (आक्रोशित हुँदै) : मैले कहाँ भने त्यस्तो ? शतप्रतिशत गलत हो । तपाईंजस्तो निकृष्ट सोच राख्ने मान्छे म होइन । यही बैठकबाट तुरुन्त छानबिन कमिटी बनाऔँ, कहीँ–कतै त्यसरी बोलेको एउटा मात्रै प्रमाण देखाउन सक्नुभयो भने म जस्तोसुकै सजाय भोग्न तयार छु । बरु, राजेन्द्र गौतमले मेराविरुद्ध सार्वजनिक रूपमै लेख्दै हिँड्नुभएको छ, बैठकले कारबाही गरोस् ।
ओली : (‘बुधबार’ पत्रिका देखाउँदै) मेराविरुद्ध पनि तपाईंले बुधबार पत्रिकामा के–के लेखाउँदै हिँड्नुभएको छ, अनि कारबाही कसलाई गर्ने ?
नेपाल : मैले कहाँ, के लेखाउँदै हिँडें, स्वास्थ्यविरुद्ध के–के बोलेँ, दुवै नोट गरियोस्, तत्काल छानबिन गरियोस् ।
प्रचण्ड, वामदेव, नारायणकाजी (हस्तक्षेप गर्दै) : स्वास्थ्यलाभको कामना गर्ने बैठक हो, भनाभन गर्नुहुन्न । माधव कमरेडले स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दा अध्यक्षले यसरी लिन्नँ भन्नुहुन्नथ्यो, अब यो कुरा यहीँ रोकौँ ।
दूरी कम गर्न ओली र नेपालबीच सन्देश आदानप्रदानको पहल भने भएको छ । बालुवाटारबाट ओलीको सन्देश लिएर बंगलादेशका लागि नवनियुक्त राजदूत डा. वंशीधर मिश्र पछिल्लोपटक नेपालनिवास कोटेश्वर पुगेका थिए । मिश्रले प्रधानमन्त्री ओलीले दूरी बढाउन नचाहेको र कमजोरी भएको महसुस गरिसकेकाले त्यही सन्देशका साथ उनका जनसम्पर्क सल्लाहकार अच्युत मैनाली र सांसद सुमन प्याकुरेलले भेट्न खोजेको नेपाललाई जानकारी गराएका थिए । जवाफमा नेपालले आफूले पनि कमजोरी महसुस गर्ने र अनावश्यक दूरी बढोस् भन्ने चाहना नरहेको भन्दै भेटका लागि तयार रहेको सन्देश फर्काएका थिए । तर, त्यसपछि मैनाली र प्याकुरेलले नै नेपालसँग भेट नगरेपछि ‘आइसब्रेक’ हुने गरी द्विपक्षीय संवाद अघि बढेन । मैनालीले कुनै पनि विषयमा कुराकानी गर्ने उद्देश्यले नेपालसँग भेट नभएको बताए । ‘उहाँसँग मेरो भेटघाट भएको छैन,’ मैनालीले भने, ‘प्रधानमन्त्रीज्यू र उहाँ (नेपाल)बीच पनि संवाद भयो कि भएन, मेरो जानकारीमा छैन ।’
पार्टीभित्रै आपसमा नेताहरू लडाएर व्यक्तिगत स्वार्थपूर्ति गरे । एक व्यक्ति : एक पदको नारा दिएर तत्कालीन अध्यक्ष झलनाथ खनाललाई पन्छाउँदै आफू संसदीय दलको नेता चुनिए । वामदेवलाई प्रधानमन्त्री या पार्टी अध्यक्षमध्ये एक पदको आश्वासन दिएर अध्यक्ष बने । पार्टी एकताका वेला वरीयता हेरफेर गरेर खनाललाई बाइपास गरे । अहिले त्यही वरीयतालाई मुद्दा बनाएर ममाथि प्रहार गरेका छन् ।
शुक्रबार स्वदेश फर्किएका प्रधानमन्त्री ओली आइतबारबाट नियमित काममा सक्रिय बनेका छन् । यद्यपि, आइतबार निजामती सेवा दिवसका अवसरमा सिंहदरबारमा आयोजित कार्यक्रममा भने प्रधानमन्त्री ओली चिकित्सकको सुझाबअनुसार सहभागी भएनन् । सोमबार बिहान भने बालुवाटारस्थित निवासमै उनले प्रचण्डसँग छलफल गरे, साँझ चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीसँग भेटवार्ता गरे । आइतबार पनि उनले प्रचण्डलगायत पार्टी नेताहरूसँग छलफल गरेका थिए । चार दिनदेखि सरकारी निवास बालुवाटारबाहिर ननिस्किएका उनी मंगलबार सिंहदरबारस्थित कार्यालय जाने कार्यक्रम रहेको उनका प्रेस सल्लाहकार कुन्दन अर्यालले जानकारी दिए । मंगलबार नै अपराह्न १२ बजे प्रधानमन्त्री ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले मोतिहारी–अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइनको भिडियो कन्फरेन्समार्फत संयुक्त रूपमा उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम छ । दुवै प्रधानमन्त्रीले आ–आफ्नो देशबाट स्विच अन गरेपछि पाइपलाइन सञ्चालनमा आउनेछ । नयाँ पत्रिकाबाट